Nepali Films Archives - Nalapani
अभिनेता रमित ढुंगानासँग फिल्म ‘राजा साहेब’ मा रोमान्स गर्ने यी हुन् दुई अभिनेत्री… (हेर्नुहोस पुरा बिबरण)
राष्ट्रिय अवार्डमाथि करिश्मा, सरोज र नीताको व्यंग्य (हेर्नुहोस पुरा बिबरण)
हेर्नुस् वर्षा राउत यौनकर्मी बनेको फिल्म ‘मेरो पैसा खोई’ (पूरा चलचित्र)
यूकेमा नम्रताको खुलेको सारीले दर्शकलाई बनायो भुतुक्कै, जता धिरज उतै जसिता, के पाक्दैछ ? (भिडियो)
Category Archives: Nepali Films
नेपाली फिल्ममा राम्रो दबदबा बनाएको समयमा अभिनेता रमित ढुंगानासँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्न अभिनेत्रीहरु मरिहत्ते गर्थे । त्यसबेला उनीसँग काम गरेपछि करिअरले गति लिने विश्वास व्याप्त थियो । तर, अहिले उनको जोडी बन्न चिनिएका अनुहार त टाढाको कुरा नयाँ युवती समेत हत्तपत्त तयार हुँदैन । किनभने, पछिल्लो समय रमितको क्रेज शून्य बराबर छ । जसकारण उनीसँग काम गरेपछि करिअर… Read More »
गत शुक्रबार राष्ट्रपति भवनमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड’ वितरण गरियो । तीन वर्ष देखि रोकिएको अवार्ड हुदाँ पनि फिल्मकर्मीहरु खुशि हुन सकेका छैनन् । वर्षमा दर्जन भन्दा बढि अवार्ड आयोजना हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय अवार्डको गरिमा खस्किदो क्रममा छ । निजी अवार्ड पैसामा बिक्ने र भाग पुर्याउनको लागि बाँडिन्छ भन्ने अरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोपबाट राष्ट्रिय… Read More »
शुक्रबार बेलुकी राष्ट्रपति भवन शित्तल निवासमा आयोजना भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा नायिका बेनिशा हमालले चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’बाट वि.सं २०७४ सालको उत्कृष्ट नायिकाको पुरस्कार जित्दै गर्दा चलचित्र ‘बुलबुल’बाट नायिका स्वस्तिमा खड्काले वि.सं २०७५ सालको उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितिन् । एकैसाथ ३ बर्षको अवार्ड वितरण गरिएको थियो । स्वस्तिमासँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश मैले अवार्ड नै पाउँछु भनेर काम… Read More »
काठमाडौँ । नायक सौगात मल्ल र नायिका वर्षा राउत मुख्य भूमिकामा रहेको नेपाली फिल्म ‘मेरो पैसा खोई’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। यो भन्दा पहिले चलचित्रको सारांश भिडियो रिलिज भएको थियो। यस फिल्ममा नायिका वर्षा राउतले एक यौनकर्मीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् जुन उनको फिल्म करियरमा बिल्कुलै नयाँ भूमिका रहेको छ । यस फिल्ममा सौगात र वर्षाका अलावा छुल्ठिम… Read More »
काठमाडौँ । आखिर लण्डनमा के चल्दैछ नायक धिरज मगर र नायिका जसिता गुरुङ बिच ? आखिर हरेक कार्यक्रममा किन छुट्दैन यो जोडी?आजको यस भिडियोमा हामी यसै विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ साथै लण्डनमा आयो जना भएको चलचित्र प्रसादको कार्यक्रममा साडीमै नायिका नम्रता श्रेष्ठ यति धेरै खुलिन् ।नायिका नम्रता श्रेष्ठ जो नेपाली मिडियामा निकै कम आउने गर्छिन् र वर्षमा… Read More »